कञ्चन प्रकरणः यस्तो रहेछ वास्तविकता, पीडित को ? (हेर्नुस् पूर्वपति मोहनको स्पष्टिकरण) - Enepalese.com
कञ्चन प्रकरणः यस्तो रहेछ वास्तविकता, पीडित को ? (हेर्नुस् पूर्वपति मोहनको स्पष्टिकरण)
इनेप्लिज २०७३ मंसिर ६ गते ११:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ५ मंसिर । चर्चित पत्रकार सुमन खरेलले कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘सुमन सँग’ कार्यक्रममा कञ्चन शर्मा रेग्मीसँग लिएको अन्तर्वार्ता अहिले विवादमा छ । कार्यक्रममा कञ्चनले आफ्ना दुई छोरा र पतिलाई अत्यन्तै अपमानजनक तरिकाले प्रस्तुत गराएकी थिइन् भने प्रस्तोता सुमन खरेलले पनि हो मा हो मिलाएका थिए । तर, कञ्चनका पूर्वपति बाजुराका मोहन रेग्मीले कार्यक्रममा आएकासम्पूर्ण कुराहरू गलत भएको बताएका छन् । एक अनलाइन अन्तर्वार्तामा उनले सत्य कुरा खुलाएका छन् र कुरै नबुझी ‘मलाई अपराधी भन्नेहरु हो, यो घटनामा मेरो परिवारलाई किन मुछ्यौं ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।